IMEX America: Kana isu tichida chitsva chakajairwa, isu tichafanirwa kuti tigadzire isu pachedu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » IMEX America: Kana isu tichida chitsva chakajairwa, isu tichafanirwa kuti tigadzire isu pachedu
Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Vatauri vanobva muchadenga, hunyanzvi, dhizaini, uye tekinoroji yechiitiko vanoongorora zvakanyanya hunyanzvi musi waJuly IMEX Buzz Day.
Kubatana pamwe nehunyanzvi ndiwo mazwi ewatch ezve IMEX's Buzz Day muna Chikunguru.
Ino ichave masikati emahara edzidzo papuratifomu nyowani yekambani, IMEX BuzzHub.
Pasi pebhanhire Extreme Innovation - Chii icho uye nei zvichikosha? nyanzvi kubva kuAirbusus, Smyle, iyo GCB nemasangano ekugadzira anotsanangura kuti vakasundira sei miganhu kuunza shanduko uye kugadzira kukosha kutsva kune yavo indasitiri.
Zvakare - muindasitiri kutanga - iyo IMEX Boka iri kushanda pamwe neSwapcard kuendesa zvikamu zvecrossover. Vapindi vechiitiko cheSwapcard cheEvolve Homecoming chiitiko: Iyo Huru Indasitiri Inodzoka uye IMEX's Buzz Day ichakwanisa kuwana zvirimo zvirimo kusanganisira hurukuro yakanyorwa naArianna Huffington.
Ose maviri madzinza echiitiko anokokwa kuti vauye pamwechete pachiitiko chepedyo kuGather Buzz Fest yakaitirwa pachikuva cheGather. Guta. Iyi avatar-inotungamirwa nod kumitambo yemavhidhiyo makumi masere yakange iri hit huru panguva yekuyedzwa kweIMEX mwedzi wapfuura.
Yakanyanya hunyanzvi - kutanga neAirbus
Mutungamiri weAirbus 'innovation lab anotangisa Zuva reBuzz musi wa7 Chikunguru. Christophe Debard ndiye mutungamiri weProtoSpace Toulouse, lab yakatsaurirwa hunyanzvi muAirbus. Akavambawo Airbus 'Humanity Lab - chirongwa chinogonesa vashandi veAirbus kutora chikamu muzvirongwa zvinokanganisa nzvimbo dzinosanganisira kuremara, hutano, dzidzo uye nharaunda. Chirongwa ichi chakagadzirwa kunze kwehupenyu hwaChristophe hwekuremara.
Christophe Debard, Musoro weProtoSpace Toulouse - Airbus
Kuva nehungwaru uye kushanda pamwe chete kutyaira hunyowani dingindira rinomhanya mukati mezuva rese rekubuda. Robert Dunsmore, uyo anotungamira chimwe chirongwa, anotsanangura kuti: “Shinga. "Kana tichida hutsva, tinofanirwa kuzvigadzira pachedu!" Anogadzira mazano Robert ari kubatana naFrankie Boyle, wekuUK anoonekwa muoni ane anopfuura makore gumi ezviitiko mune ehunyanzvi, varaidzo uye zviitiko zvezviitiko. Frankie ane hunyanzvi hwekushandisa mwenje wekutaura nyaya uye kugadzira ruzivo rwekunzwa: 'Chiedza mutauro', anodaro. Frankie achagovana tsvagiridzo yake mukukosha kwechiedza kuhupenyu, chinzvimbo chayo mukati medu maitiro ekuziva, hutano hwepfungwa uye kuziva muhupenyu hwezuva nezuva.
Frankie Boyle, Muvambi - Creative Director weFebo Designs Ltd.
Iyo GCB ichapa maonero avo sevanogadzira iyo nyowani 'Mhinduro Kamuri'. Iyi yakavhurika hunyanzvi chikuva inokurudzira varongi musangano wepasirese, varongi, vatengesi, uye vatori vechikamu vezviitiko kuti vaungane uye pamwe chete vagadzire matsva emabhizimusi emhando, zvigadzirwa kana masevhisi.
'Chii chauchatora kubva mudambudziko iri?' inobvunza Matt Margetson, Muvambi & Innovation Director kuSmyle, muchikamu chake. Iye achatarisa kuti mabhureki akatsvaga sei zano kubva kune yekugadzira indasitiri kuti igare yakakodzera uye kutaurirana nevateereri vavo munzira dzinogara dzichiwedzera. Achikurumidza kugadzirisa kambani iyi kupayona zvinoitika, Matt anotungamira timu yake mukutsvaga kwakanyanya kufunga uye kwazvino tekinoroji.
Indasitiri kutanga - IMEX uye Evolve madzinza anosangana
Mune yekutanga indasitiri, iyo IMEX Boka iri kushanda pamwe neSwapcard kuendesa zvirimo panguva imwe chete. Vapindi veZuva reBuzz uye Evolve's Homecoming vanogona kuwana musangano wakasarudzika wekuti ungavaka sei tsika yekuvandudza.
Strategic chipangamazano Cris Beswick, anozoendesa musangano, anotsanangura kuti: "Kudikanwa kweinotungamirwa-inotungamirwa, hutungamiriri hwekugadzira uye kuvaka tsika yezvinhu zvitsva haina kumbobvira yakakwira pamusoro pegadziriro yezvirongwa." Inozivikanwa pasi rose semutungamiri anofunga pamusoro pemaitiro ehunyanzvi, hutungamiriri uye tsika nemagariro, Cris yakabatsira vamwe vevatungamiriri vepamusoro, vatungamiriri, makambani nehurumende kugadzirisa matambudziko avo akaomarara. Iye achatora pane ichi chiitiko uye agovana mamwe emazano kubva kubhuku rake rinotengesa "Kuvaka Tsika Yehunyanzvi."
Mukoko webasa unoenderera mberi nemukana weBuzz Day uye nharaunda dzeSwapcard dzeEvolve kuti dzigare pamwe chete paGather. Guta panguva yeGather Buzz Fest. Yakatsanangurwa nemumwe wevatori vechikamu se "kunzwa sekunge iwe wakasvetukira mukati mekombuta yako nekamuri izere nevanhu vakaita zvakafanana," Gather.Guta rinobatanidza maavatatisi akareruka nema80s emitambo vibe kugadzira nyika yedhijitari inonakidza, kutsanya uye hushamwari.
Carina Bauer, CEO weImEX Group, anotsanangura kuti: "Kugadziriswa ndiyo chete nzira yekugadzira shanduko ine chinangwa uye kuvaka kumberi zviri nani. KuIMEX tinogara tichiedza kusundira miganho yekugadzira uye kuyedza vakamirira indasitiri. Kubvumira yedu "BuzzHubbers" kuona muchikamu cheEvolve uye mukana wekutandara - zvirinani - kuGather Buzz Fest paGather.Town chiedzo chatinonzwa kuti marudzi ese achakoshesa nekukoshesa. "Tinofara kuve tiri kutungamira nemweya wekushandira pamwe, kwete kukwikwidza."
Julien Bouvier, Evolve Events Director uye Chiitiko Strategist paSwapcard, anowedzera kuti: "IMEX neSwapcard vanga vachiendesa zvirimo pamwedzi kune vateereri vavo veadhijitari uye zano rekugovana zvirimo rakauya kumapoka ese ari maviri nekurudziro! Nharaunda dzeEvolve neBuzzHub ndidzo dziri mbiri mienzaniso yevagadziri vezviitiko vanofamba vachienda kune yemazuva makumi matatu nematanhatu yemhando yekubatanidzwa. "Haingowedzere chete kusvika pasirese kwevateereri vese, asi nharaunda dzinopa mukana wekugovana ruzivo rwakachengeteka uye pachena pakati pevatengesi nevatengi."
Iyo IMEX Zuva reBuzz inoitika musi wa7 Chikunguru uye kunyoreswa kuri vakasununguka. Zuva rakazara rekudzidza rinowanikwa pamwe neiyo Shanduka Kumba Kumba: Iyo Huru Indasitiri Inodzoka.
IMEX BuzzHub inomhanya kusvika Nyamavhuvhu ichiendesa kubatana kwevanhu, kukosha kwebhizinesi uye zvakagadzirirwa zvemukati mu'Mugwagwa unoenda kuMandalay Bay 'mukumhanyisa kusvika IMEX America, Mbudzi 9-11, uye Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI munaNovember 8.
Dzimwe nhau nezve IMEX